Nike, Adidas, Reebok, Puma, nalalka, maqaar, suun
Cajiibka madow - moodooyinka ugu caamsan iyo waxa la xiro?
Dhowrkii la soo dhaafay, kabaha isboortiga waxaa loo aqoonsan yahay in ay yihiin qalab caalami ah kuwaas oo si fiican u buuxin kara sawirka oo kaliya maaha qolka jimicsiga ama socodka , laakiin sidoo kale barkadaha jidka. Iyo xulashada ugu guuleysataa-guuleysta waxay noqon doontaa suntan madow, kaas oo ku haboonaan doona labada qaan qafiif ah, iyo isku-kalsoonaanta.
Dumarka madow ee haweenka
Midabeynta caadiga ah ee caadiga ah ayaa maanta laga helaa qaab kasta - labadaba xirfad u leh tababarka, iyo Kazehalnoe si loogu isticmaalo maalin kasta. Intaa waxaa dheer, qalabka mugdiga ah waa wax aad u macquul ah marka loo eego iftiinka, kuwaas oo si gaar ah muhiim ugu ah firfircoonida firfircoon ee firfircoon. Oo maanta macaamiisha madadaalo ee ugu caamsan ee gabdhaha waxaa matala hababka soo socda:
Snickers . Nidaamka xiran ee kuxirsan qarsoodiga ah kama soo baxo isbeddellada sanado badan oo isku xiga. In midabada mugdiga ah Sneakers isla markaa isku daraan qaab isku mid ah oo kalsooni leh.
Cajiibka madadaalada ee madow . Nidaamka tooska ah ee hooseeya ee lakabka ayaa weli ah qaabka ugu caansan. Ka dib oo dhan, kaliya classic waa loo tixgeliyaa guud ahaan sawirka jihada kasta.
Waad kici kartaa . Si ka duwan qaababka caadiga ah, macalimiin xirfadley ah ayaa lagu qalabeeyaa nuugista naxdinta leh. Xoogga saariddu waxay sidoo kale ku jirtaa kabo shidaal ah iyada oo loo marayo daboolka iyo suufka suufka leh.
Iyadoo dhogorta . Dhammaystirka furan ma aha had iyo jeer riwaayad shaqeyn ah oo loogu talagalay qalabka xilliga qaboobaha. In qaab naqshad leh qurxiyo qurux badan iyo quruxda sare ee.
The ugu macquulsan iyo dhar-adkaysi u yihiin modelada ka mid ah maqaarka dhab ah. Si kastaba ha ahaatee, suuq casri ah, waxaad sidoo kale ka heli kartaa ikhtiyaar tayo ah beddelaad dabiici ah. Dumarka maqaarka ee madow waxay ku caanbaxayaan naqshadaha iyo naqshadaha labadaba. Doorashada muuqaalka ah waxay noqon doontaa qaab gaaban oo ka yar maqaarka abeesada, yaxaasyada, dhirta iyo xayawaanka kale. Waxyaabaha suunka ah ee suurtogalka ah ayaa si fiican ugu habboon leh nooc kasta oo casri ah - dhogorta, baalalka biraha iyo naqshadaha, textile iyo suede gaaban iyo kuwa kale.
Dhalinta sariiraha madow
Ma socdo isbeddel muuqaal ah ee uruurinta dhawrkii sano ee la soo dhaafay waxaa loo tixgeliyaa kala duwanaansho leh laydh hal gaar ah. In midabka midab madow ah, dhamaystirkaas ayaa si fiican u dabooli doona hooskii dharka iyo accessories. Naqshadayaasha waxay bixiyaan moodooyinka maqaarka, suede iyo dharka, kuwaas oo kaa caawin doona inaad doorato ikhtiyaarka ugu habboon, adoo tixgelinaya xilliada. Xirfadaha saafiga ah ee madow waxay ku qalabaysan yihiin talobixin ku xiran USB-ga si loo buuxiyo bateriga. Aragtidu waxay inta badan leedahay qaabab badan - mid isku mid ah, isdabajoog, foog, midab leh iyo kuwo kale. Doorashadani waxay ku fiican tahay naadiyada iyo xafladaha habeenkii.
Dharbaaxaha madow ee kubadda cagta
Qayb sare oo keliya ayaa weli ah xalka caanka ah ee naqshadeynta qalabka muhiimka ah iyo kan sare, kan ugu fiican. Kuwa ugu caansan waa dharbaaxada madow ee kuyaal sareeya oo laga sameeyey polyurethane. Kabaha noocan oo kale ah ma aha kuwo culus, taasoo raaxo leh lugaha lugta muddooyinka dheer. In version moodada on platform ah ee manga, caag ah, silikoon. Aad u qurux badan ayaa u muuqda midabtakoorka midabtakoorka, kaas oo si siman u dhigaya mugdiga, dusha sarreeya. Ururada ugu dambeysay, naqshadeeyayaasha waxaa loo bixiyaa xitaa saldhig, iyo gargaar, qaab muuqaal ah, iyada oo loo wareejinayo shandada.
Saraakisha sare ee madow
Daboolka sare - waa doorasho ku habboon xilliga xagaaga ee qoyan. Cagaha xidhan iyo anqawyada waxay bixiyaan raaxo buuxda iyo ilaalinta cagaha oo ka yimaada qoyaanka, sidaas darteed ugu caansan waa alaabta maqaar. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad muhiim u tahay inaad xoogga saartid sawirka saxda ah iyo saxsanaanta, markaa xulashada ugu fiican waxay noqon doontaa sariiraha madow. Dusha sare ayaa u muuqata mid aan fiicnayn oo kaliya xitaa khafiif ah xitaa laakin, laakiin sidoo kale leh barxad, jajab, saldhig tareen ah. Xalalka casriga ah, oo mar kale ka caawiya inay soo jiidato dareenka dadka kale ee kabaha casriga ah, waxay noqon doontaa luqad ballaaran.
Dharbaaxo madow leh rinjiyeyaasha
Naqshadeynta leh qurxinta dhalaalaya waxay isku daraysaa qaab-dhaqameedka qaab-dhaqameedka iyo dib-u-kicinta. Moodooyinka noocan oo kale ah waxay noqdeen caddayn kale oo xitaa jihada cayaaruhu waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh. Naqshadayaashu waxay bixiyaan dhar madow oo leh rinjiyado midab leh, kuwaas oo kaliya ma aheyn kuwa lagu yareeyo asalka maskaxda, laakiin sidoo kale waxay samayn doonaan qaabka aasaasiga ah ee sawirka oo dhan. Haddii aad u hoggaansameysid dufanka basasha, fiiro gaar ah u dooro dhagax madow. Doorashadani way fududahay in la iftiimiyo lana reebo banaanbaxyo xadidan.
Xirfadlayda madadaalada ee madadaalada ah
Midabaynta madow micnaheedu maahan in xulashada noocan oo kale ah ay noqon doonto kaliya iskudubarid ama dhammaad la'aan. Habka casriga ahi wuxuu soo dhaweynayaa wixii tijaabo ah ee qurxinta iyo qurxinta, qaabka iyo xalalka midabka. Haddii aad rabto inaad si toos ah ugu soo jiidato kabaha, waxaa haboon inaad ogaato qaababka ugu mihiimsan ee xilli-ciyaareedkii hore:
Dharbaaxaha madow oo aan lahayn lakab . Kala duwanaansho la'aantu waxay si isdaba-joog ah u beddeshaa qaabka cayaaraha. Xalkani wuxuu u muuqdaa mid sax ah. Beddelaadyada qolka gaaban wuxuu noqon karaa fiilo ama hillaac.
Dharbaaxo madow oo leh qaanso . Sida caadiga ah, qurxinta jacaylka noocan oo kale ah waxay qurxisaa moodooyinka aan lahayn nuucyo ama isla mar ahaantaana waxay u dhaqmaan sida xadhigga. Doorashada moodada waa qaab nadaamsan oo leh maqaar, dhar, dhuxul, satin qaanso.
Iyadoo leh cad cad . Xalka ugu fudud, oo aan u muuqan wax caddayn ah, wuxuu noqon doonaa doorasho leh midab kala duwan oo saldhig u ah. Gaar ahaan waa caan waa qalabyo leh cadaan cad.
Iyadoo daabacan . Midab madow wuxuu u shaqeyn karaa asal ahaan sawir qurux badan. In isbedelka, daabacaadda caddaanka ah iyo kuwa cagaaran, iyo xalalka midabka. Kuwa ugu caansan waa ubaxyo, joomatari, furiinka asaasiga ah.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee alaabooyinka ka soo jeeda Maraykanka waa mid caalami ah. Naqshadayaasha waxay xoojinayaan shaqeynta kabaha barkinta, gaar ahaan midabada caadiga ah. Xirfadlayaasha Nike ee Nike ee haweenka ayaa lagu soo bandhigaa taxane kasto - ciyaaraha isboortiga, xirashada maalinlaha ah, kuwa gaarka ah iyo kuwo kale. Gaar ahaan caan waa xayawaanka labada xal. Madow waa tan ugu weyn ee halkan. Dhammaystirku wuxuu noqon karaa doorasho guul leh oo cad ama midab leh - casaan, turquoise, buluug iyo kuwo kale. Marka laga soo tago muuqaalka quruxda badan, naqshadeeyayaasha ayaa sidoo kale xoojinaya tayada sare ee alaabta.
Noocyada ka soo caansani ma aha kuwo ka xun kuwii hore. Naqshadayaasha Adidas waxay isticmaalaan hooska caadiga ah ee xariiqa kasta - Muuqaalka qaabaynta ee dusha sare aan lahayn, Clima Cool oo leh hawo korodhin leh, Rip-sport oo leh hawl ka saarista qoyaanka, Taakulaynta miisaska magaalada ee maalinlaha ah. Xog ururin kastaa waxaa ku jira moodooyinka daruuriga ah ee leh dhar cad. Adidas-ga dhar-goyska madow ee haweenka ayaa marwalba ku kala duwan qaabka wanaagsan iyo qalabka tayada. Kabahaasi wuxuu noqon doonaa xalka ugu fiican ee socodka dheer ee isbedelka iyo isbedelada joogtada ah ee maalintii oo dhan.
Qalabka ugu caansan ee shirkadani waxay ahaayeen kuwa madadaalada Reebok ee madadaalada ah ee qaabka caadiga ah. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah alaabooyinkaasi waa maqaar sare oo sare. Ururada ugu dambeeyay, nashqadayaashu waxay tijaabinayaan dharka iyo suubinta. Si kastaba ha noqotee, maqaarka kaliya waxaa loo tixgeliyaa calaamad muujinaysa kabo tayo leh. Waxyaabaha idil ee muraayadaha mugdi ah, qaabeeyayaasha ayaa kala saaraya oo xiran-sare. Asalka astaamaha kabtani waxay ku qoran tahay saxsanaanta. Halkan ma heleysid qalab aan qalafsaneyn ama carrab ballaaran.
Waxyaabaha ugu caansan ee ka soo jeeda Jarmalka dhowr xilli ciyaareed oo isku xigta ayaa weli ah qaababyo ka soo jeeda Rihanna . Kabaha noocan oo kale ah ayaa lagu fuliyaa qaab dabiici ah oo aan ku haboonayn sifooyinka ciyaaraha. Dusha sare ee suede waa mid aad u badan oo lagu dhejiyo laf dheer oo laga sameeyay manga. Waxyaabaha kale ee la moodo - sariirta Reebok ee madow ee haweenka ee maqaarka patent. Marka la eego midabada caajiska ah, naqshadeeyayaasha waxay diirada saaraan dhinaca qurxinta, iyagoo kabaya kabaha leh matxafyo ballaaran ama jibbaar, iyagoo tilmaamaya calaamadda brandka leh dahab ama lacag.
Maxaa la xiraa sariiraha madow?
Habka casriga ah, kabaha isboortiga waxaa loo tixgeliyaa dhammaadka guud ee sawir kasta. Stylists waxay tijaabiyaan kooxo isboorti oo isku dhafan isboortiska iyo fasalka, jacaylka, galka iyo tilmaamaha kale. Faa'iidada aan loo baahneyn ee walxaha mugdiga ahi waa awoodda ay u leeyihiin inay dhameeyaan dharka midab kasta iyo xitaa daabacado. Fikradaha kala duwan ee naqshadeynta waxay kaa caawineysaa in aad xirtid walxaha wardrobe wakhti kasta oo sanadka ah. Aynu ogaanno kuwa qaansada leh sariiraha madow waxa loo tixgeliyaa kuwa ugu mihiimsan:
Fikrad guud . Ha ka baqin inaad gashan gebi ahaan sawir mugdi ah. Si aan u muuqan murugo iyo calool-xumo, ku-dhufo isku-dhafkan dharka dharka, qaababka leh rinestones, maqaarka dhejiska ah iyo gooyo aan caadi ahayn.
Iyadoo jimicsi . Maalin kasta oo doorasho ku guuleysato waxay noqon doontaa labbo dijitaal ah. Xaaladdan oo kale, qaabab kasta - maqaarka, wiilka, saxanka sare, kalt, 7/8 iyo kuwa kale ayaa ku habboon.
Dharka iyo dharka . Qalabka madow waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo leh koobabka maroodiga ah ee dharka - shaati , shirt, hoodie, sarafan iyo kuwo kale. Soo qaadashada goonada, waxaad isku dayi kartaa noocyo kala duwan. Tusaale ahaan, kalkaaliyadu waxay ku dari doontaa jacaylka, qalin-cillad-adag.
Dharka dibadda . Xulashada ugu wanaagsan ee dharka kuleylka diiran waa dharka qayb ka mid ah cutubka ama ka weyn. Wakhtiga kuleylka ah, jaakad madow oo midabkiisu isku mid yahay oo dhameystiran ayaa dhammayn kara.
Jiko-madow oo madow
Dharka Dharka ee Long Long
Xagaaga xagaaga - qaababka ugu quruxda badan, casriga ah iyo quruxda leh xagaaga
Sawir-abuur oo loogu talagalay T-shirt
Muuqaalka Muuqaalka Cosmos
Kabaha haweenka ee madow
Kabaha kabaha Carlo Pazolini
Suxuunta Sannadka Cusub - Nolol shisheeye ee qoyska oo idil
Dumarka dhar-xidhka ee haweenka
Dharka ku xir dharka
Gardarrada xagaaga loogu talagalay haweeney 40 jir ah
Sidee u socotaa heeshiisa?
Beddelida wadajirka jilibka
Lobio - cuntooyinka xiisaha leh ee saxanka dabiiciga ah ee Georgian
Wuxuu bogsiiyaa Soul
Si dhakhso ah uga saar: 25 ka mid ah hargabka cusub ee wax soo saarka ah
Heerkul kordhay inta lagu jiro mudada uurka
Sidee loo kariyaa sausada?
Mishiinka qaboojiyaha ku jira qaboojiyaha
Sidee loo dejiyaa eyga?
Kabaha aan laheyn heels 2016
Calaamadaha dabka ee jilitaanka
Qalabka hawada ee guryaha
Maxaa la xiraa kabaha lafdhabarashada?
Dharka dharka arooska
Wareegga wata eeyaha - astaamaha
Turkiga korodhka - qashinka